The Unique Pink 15.38 Carat diamond uthengisa for $ 31.6 million
diamond pink, Unique Pink
Fancy ezicacile pink eliphakathi kwe diamond ezimise enkulu kunazo zonke emhlabeni kuze kube phakade wanikela endalini at Sotheby ngo-Geneva, e Unique Pink okuyinto bathengisa for $ 31.6 million.
Zonke ayigugu kanye idayimane ezinemibala kufanele kuyabonakala ngeso lenyama ukuze ukale umbala wabo, njengoba umbono wokuqala ezibukwayo kubalulekile. Ukuthatha incazelo umbala kusukela isitifiketi yedwa kuphela kukunika ingxenye indaba.
diamonds Pink kungaba ahlanganise ezihlukahlukene anemibala, kusukela purplish kuya orangey ukuze ngokubomvu, futhi lokhu diamond has a pink elimangalisayo ngiloku obonakala ukubonisa tinge kancane obomvu, okwenza kube eyingqayizivele ngempela. Ngokungafani nezinye diamonds anemibala lapho luhlaza kubangelwa Ukungena kwenye atom ezifana nitrogen noma boron, pink idayimane umbala kwenzeka ngenxa kwencazelo noma ukucindezeleka isakhiwo crystal lapho kwamiswa izigidi zeminyaka edlule.
The Unique Pink 15.38 Carat diamond sanqunywa by Cora International, inkampani eyaziwa emhlabeni wonke ngokukhiqiza diamonds ezingavamile osayizi enkulu futhi egqamile fancy. Umsebenzi ukusika wokucwebezelisa lokhu crystal rough yayiyobe iqale izinyanga eziningi ekunqumeni ukuthi kuzuzwe umbala ukuze amandla ayo esiphezulu, futhi kukhona kuphela bezihlahla ezimbalwa kakhulu abantu ezweni abamane kungathatha kule nselele.
Kukhona i lokulahlekelwa ukusika noma yikuphi diamond, futhi ukusika itshe anemibala luyindida nakakhulu njengoba ufuna ukwenza umbala njengoba donsile njengoba kungenzeka ngokuthola it echichima kusukela maphakathi itshe. Lapho ukusika idayimane white, iqhinga okuphambene liyadingeka ukubenza ubukeke kungekho nto enemibala emihle. Kunzima kakhulu ukulinganisa umbala ekugcineni a diamond pink ngenkathi usike leli sondo njengoba kungaba nokushisa up okwesikhashana okuwenza ukushintsha umbala, ngakho wokusika ngeke abone imiphumela weqiniso kuze kube diamond eye selehlile.
I Gemological Institute of America amamaki cishe zonke idayimane ebaluleke kunazo zonke emhlabeni nakuzo zonke wamadayimane ungeniswe kumphatsi wesifundvo laboratory unyaka ngamunye ezingeqile kwezintathu per cent ihlukaniswa njengoba diamonds ezinemibala. Engaphansi kweyisihlanu angu labo idayimane amaKhaladi bangamaRoma pink. Leli tshe ibuye labizwa ngokuthi Uhlobo IIa okuyinto uhlobo oluhlanzekile kakhulu amakhemikhali diamond esekelwe phezu ukungabikho nitrogen. Mabili kuphela per cent of bonke idayimane misela isibonisi ngale kuphelela.
Ngaphandle nje kokuthi umnikazi omusha ukuthenga eyodwa amagugu eziyivelakancane nature sika yena noma yena uzokwazi kabusha itshe, nje ukwengeza ukuze ehlukile yayo.
Blue Diamond Uthengisa for $ 58 Million